नोभेम्बर २०१ - - नेटवर्क रेडियो
घर / 2017 / नोभेम्बर
प्रकाशित नोभेम्बर 30, 2017
Inrico TM-7 / Einige Mlglichkeiten धेरै ALL möglich ist mit dem POC थियो
के क्यान आइच एलेस मचेन मिट डेम थियो इन्रिको टीएम-7? Hier einige Möglichkeiten यति ALES moeglich ist थियो। Aber es geht noch viel mehr। द्वारा Zello.info
प्रकाशित नोभेम्बर 29, 2017
सबै स्वादको लागि TM-7
तलको भिडियोमा, म कसरी प्रयोग गर्छु भनेर देखाउँछुnrico TM-7 IRN, Zello, Echolink र एक रेडियो-स्क्यानरको रूपमा पनि।
मलाई आशा छ तपाईंले रमाईलो गर्नुभयो। मलाई लाग्छ कि यो मसँग भएको सब भन्दा राम्रो आईपी रेडियो हो!
प्रकाशित नोभेम्बर 28, 2017
तपाईंको कार ड्यासबोर्डमा Inrico TM-7 अनप्याकिंग र स्थापना गर्दै
यो भिडियो तल जर्मनमा छ, द्वारा बनाइएको ज़ेलो फk्क र यसले अनप्याकिंग देखाउँदछ Inrico TM-7 र यो कसरी फिट हुन्छ, यति राम्रोसँग, कार ड्यासमा।
प्रकाशित नोभेम्बर 26, 2017 नोभेम्बर 26, 2017
Inrico TM-7 का साथ Echolink प्रयोग गर्दै
Echolink अपरेसनसँग सम्भव छ Inrico TM-7। तर जब सम्म इचोलिंकका विकासकर्ताहरूले कुञ्जी प्रसारणमा रेडियोको PTT बटन म्याप गर्न सम्भावना थप्दैन, तपाईंले प्रसारण सुरू गर्न एक पटक टचस्क्रीन ट्याप गर्नुपर्दछ, र रोक्नको लागि फेरि ट्याप गर्नुहोस्। उपयोगिता दृष्टिकोणबाट, यो ठीक काम गर्दछ। हामी केवल प्राविधिक प्रयोग गरीरहेका छैनौं। जे भए पनि, हामी हाम हौं! हामी जहिले ईम्प्रोभाइजिंग चाहन्छौं!
तपाई जहिले पनि पठाउन सक्नुहुन्छ Echolink लाई ईमेल र यस्तो कार्यक्षमता अनुरोध गर्नुहोस्!
नोट: तपाईको TM-7 मा Echolink स्थापना गर्न, तपाईले "Orientation सेट गर्नुहोस्" भन्ने अनुप्रयोग स्थापना गर्नु पर्छ। तपाईंले यसलाई "रिभर्स ल्यान्डस्केप" मा सेट गर्नु पर्छ। तपाईं किन बुझ्नुहुनेछ! 🙂
तलको भिडियोको मजा लिनुहोस्।
प्रकाशित नोभेम्बर 25, 2017 नोभेम्बर 25, 2017
KE7HAS द्वारा Inrico TM-8 मा शानदार समीक्षा
यहाँ मा एक धेरै राम्रो समीक्षा छ Inrico TM-7। मलाई आशा छ तपाईले रमाईलो गर्नुभयो भिडियो.
प्रकाशित नोभेम्बर 24, 2017 नोभेम्बर 24, 2017
एमेच्योर रेडियो कालो शुक्रवार
किन एमेच्योर रेडियो ऑप्सको मजा लिनुहुन्न सुपर डिस्कसनहरू कालो शुक्रवार संग? निम्न चयनित सम्झौता जाँच गर्नुहोस्!
Inrico TM-7 - पहिलो मोबाइल नेटवर्क रेडियो
यो / जी / वाइफाइ सक्षम छ र यो पहिले नै हाम्रो बेस्टसेलर भयो!
भौचर कोड प्रयोग गर्नुहोस् फ्रिडे र प्राप्त 20% छूट!बाट उपलब्ध नेटवर्क-radios.com
RFinder M1 - अब सम्म सब भन्दा उन्नत DMR एन्ड्रोइड रेडियो निर्माण। प्रोग्रामिंग कोड प्लगहरूको बारेमा बिर्सनुहोस्। RFinder M1 को साथ सबै पोइन्ट र क्लिक को रूप मा सजिलो छ! विश्वव्यापी रिपीटरहरूको अपडेट डाटाबेस (एनालग र डिजिटल)
आफ्नो प्राप्त गर्नुहोस् RFinder M1 संग निशुल्क ढुवानी, कोड प्रयोग गर्दै कालो शुक्रबार
बाट उपलब्ध rfinder.shop - RFinder को आधिकारिक वितरक।
अचम्मको 4G / WIFI रेडियो टोन RT4 अपेक्षाहरू नाघेको छ! धेरै बलियो र IRN एमेच्योर नेटवर्क पहुँच गर्न एक अद्भुत विकल्प। अडियो गुणवत्ता आश्चर्यजनक छ र तपाईं एक द्रुत प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ छुट using २० को कोड प्रयोग गरेर रेडियोडिस्काउन्ट
बाट उपलब्ध नेटवर्क-radios.com
तपाईं कल्पना १W डब्ल्यू एफएम स्टीरियो प्रसारण प्रसारण? टिभिडियोलाई PLL र LCD को साथ भेट्नुहोस्।
फ्रिक्वेन्सी दायरा: .87 108.-XNUMX-१०XNUMX मेगाहर्ट्ज
सामान्य मूल्य: $ 249
बाट उपलब्ध मेगाहर्ट्ज.शप लागि $ 199
नोट: यस ट्रान्समिटरको प्रयोगको सम्बन्धमा स्थानीय कानून जाँच गर्नुहोस्।
प्रकाशित नोभेम्बर 23, 2017 नोभेम्बर 23, 2017
Inrico TM-7 बटन प्रोग्रामिंग गर्दै
यस भिडियोमा, म कसरी देखाउँछु कि कुञ्जीहरूको प्रत्येक प्रोग्राम गर्न Inrico TM-7 मोबाइल ट्रान्सीभर। तपाईंले भर्खर एउटा विशेष अनुप्रयोग प्रयोग गर्न आवश्यक छ जुन तपाईंले चाहनुभएको प्रकार्यहरूसँग कुञ्जीहरू नक्शा गर्नेछ।
मेरो घरमालिकले एन्टेनालाई अनुमति दिँदैन
मेरो घरमालिकले एन्टेनालाई अनुमति दिँदैन। त्यसैले मैले पूर्वाग्रह छोडे र IRN मा सारियो। र म यो प्रेम!
हेम्सका लागि आईआरएनको बारेमा बढि जान्नुहोस्
तपाईंलाई लाइभ रिपीटरहरूमा प्रसारण गर्न एक मान्य हामराडियो लाइसेन्स चाहिन्छ! किन तपाईं आफैले प्रयास गर्नुहुन्न? यो सित्तैमा हो। तपाईं एक स्मार्टफोन संग शुरू गर्न सक्नुहुनेछ। कुनै पनि गिअर किन्नु आवश्यक छैन! तपाईलाई चाहिने भनेको स्मार्टफोन हो।
तपाईं पनि एक जीत सक्छ मुफ्त एम्बेडेड UHF एफएम ट्रान्सीभरको साथ नेटवर्क रेडियो। कसरी सिक्नुहोस्!
प्रकाशित नोभेम्बर 22, 2017 नोभेम्बर 22, 2017
Inrico TM-7 अनबक्स गर्दै
यहाँ क्लिक गर्नुहोस् हेर्न भिडियो को अनबक्सि Inrico TM-7
प्रकाशित नोभेम्बर 16, 2017 जनवरी 6, 2018
गर्मीमा F22 र जाडोमा RT4!